ngomphathi ku 2021-05-20
Yintoni ibhegi yokuhlamba impahla? Umsebenzi wengxowa yokuhlamba iimpahla kukukhusela iimpahla, iibrasi kunye nempahla yangaphantsi ekubeni ibambeke xa uhlamba kumatshini wokuhlamba impahla, ukunqabe ukuguga, kunye nokukhusela iimpahla kwi-deformation. Ukuba iimpahla zineziphu zensimbi okanye ...
Ibhegi yokuhamba yeduffel ephathekayo yenziwe yipolyester kunye nenayiloni, kwaye ikwavumelekile ukuyila kuzo zonke iimilo kunye nemibala. Ngapha koko, ibhegi ye-duffel iya isiba nzima ngakumbi kubafazi nakwindoda. Ingxowa ye-duffel inokugcina phantse yonke into njengempahla, izihlangu, iinwele kunye neendevu ...
Intengiso yokuthenga ibhegi yokukhuthaza -umncedisi olungileyo woluntu
Ngoku iinkampani ezininzi zifuna ukuqonda indlela yokukhuthaza ngakumbi inkampani kunye neemveliso zayo, kunye nendlela yokwazisa abathengi abaninzi ngobukho benkampani kunye nezinto ezenziwa yinkampani. Ngokophando, uninzi lwamashishini kunye namaziko ngoku akhetha ukusebenzisa inkuthazo yokuthenga ...